Malunga nathi-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
I-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd yinkonzo ebanzi yolawulo lwamandla kunye nolawulo lwamandla e-smart njengeshishini layo eliphambili, ukubonelela ngeenkonzo zokuma enye njengesixhobo sokulinganisa, izixhobo zonxibelelwano, isoftware yelifu, ukudityaniswa kwenkqubo, ukusebenza kwenkqubo kunye nokugcinwa okunxulumene namandla imilinganiselo kunye nolawulo.
Inkampani yenza isokisi yokulinganisa ngobuchule, isokisi yokonga amandla, umtya wamandla, imitha yamandla ombane smart, uhlobo lwe-DIN-reli yohlobo lweemitha zamandla ombane, imitha yombane ohlawulelwa ngaphambili, imitha yamandla ombane esebenza ngombane, ukubeka iliso kwisiphelo, indawo yokufumana idatha , isixhobo esidijithali esisebenzayo, imitha yamanzi, i-terminal, i-DTU, i-RTU, umatshini wokuphatha kunye nokugxininisa ekuqokeleleni ulwazi lombane, kunye nesisombululo sobuchwephesha seemveliso ezingasentla.
Inkampani ineqela labasetyhini abancinci, abaqeqeshiweyo, abasemgangathweni wobugcisa bekhwalithi ephezulu kunye nolawulo lwasemva kwenkampani.Iqumrhu ngumbutho ojolise esifundweni okhuthaza ukufundisisa emsebenzini, ukusebenza ngokufunda, kunye nokugxininisa ekuphuculeni okuncinci yonke imihla.
I-Innovation kukusukelwa okungapheliyo kokusindiswa kwabantu, kunye nokuveliswa kwetekhnoloji yokuphuhlisa, ukuphatha izinto ezintsha ukulungiselela inzuzo, ukubekwa emgangathweni, ubuchule, iingcinga zolawulo ezicwangcisiweyo zihlala zihleli kuyilo lwemveliso, zokwenza, iinkonzo zabathengi, njl njl. inqanaba lokuqala lenkonzo.
I-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd. ihlala ibambelela kumgaqo-nkqubo osebenza kubugcisa kunye nokujonga ukuthengisa, kwaye ihlonipha isithandi-sobulumko seshishini "sokudalwa kwendibaniselwano, nokwabelana, ukuqhubela phambili, kunye nokuxhamla". Umsebenzi wethu kukujonga kulawulo lwamandla kunye negalelo kulondolozo lwamandla kunye nokuncitshiswa komoya.I-tenet yethu kukuba ngumnikezeli weenkonzo wokuqala kwicandelo lokuphathwa kwamandla smart. Ukuthathela ingqalelo umbono wokunyaniseka kunye nokuwina iziphumo, sithembisa ukubonelela ngemveliso engcono kunye neenkonzo kumthengi ngamnye. Lungu ngalinye kwinkampani yethu lithatha izinto ezintsha njengezinto ezinokuqhutywa ngonaphakade. Siya kuthi, njengamaxesha onke, sinike ukudlala okugqibeleleyo kwizibonelelo zethu zobuchwephesha kwicandelo lokulinganisa amandla kunye nolawulo ukunceda abathengi bethu ukuba bafezekise iinjongo zokusebenzisa amandla esayensi, ukugcinwa kwamandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Ngokwenza oku siya kwenza igalelo lethu kulondolozo lwezixhobo nakwindawo enobuhlobo kwindalo esingqongileyo.